Warbixin: Afartii Mageffe ee Dubai & Ganacsatada Soomaalida ee dalka Isku taga Imaaraadka Carabta – Kismaayo24 News Agency
Warbixin: Afartii Mageffe ee Dubai & Ganacsatada Soomaalida ee dalka Isku taga Imaaraadka Carabta
by Tifaftiraha K24 6th September 2017 040
Wadanka Isku tagga Imaaraadka Carabta (UAE) waa dal ay ku nool yihiin Ajaaniib aad u farabadan oo kala af iyo kala diin ah, kuwaasi oo ka kala yimid ilaa 200 oo dowladood, taas oo ay suurta galisay caddaalad kuwada noolaanshaha iyo xukun wanaaga dowladda Emiradka.
Haddaba arintaas ka duwan ayaa ganacsatada Soomaaliyeed ee degan magaalada Dubai hasatay sanadihii u danbeeyey. Qaar kamid ah ganacsata Somalida ee Dubai oo diiday in la magacaabo sababo amaan dartood waxay noo xaqiijiyeen in Arintaa taas ka duwan ayaa kala kulmeen nin amniyaadka Dubai sheegana waxayna yiraahdeen — “ganactada somalida waa lay iska xidhaa, waa layska masaafuriyaa,waa loo caga-jugleeyaa iyada oo laga faaiidaysanayo awood darida dowladda Soomaaliya, iyo ducfiga safaaradfa soomalida ee Imaaraadka. “waxaa naloola dhaqmaa sidii xoolo xero kujira oo marba kan la doono la is kala soo baxayo”.
“Waxaa intaas noo dheer, waxay nimankaa amniyaadka sheeganayaa iska kaaya hortaageen in aanu maxkamadaha iyo cadaaladda wadanka aragno, si aanu dhibka na haysta ula socod siino” — sidaas Waxaa yiri ganacsade magaciisa ku soo gaabiyey Omar Lababaale,/oo degan Dubai.
Dhibaatada iyo dulmiga lagu hayo Soomaalida ayaa waxaa ka dambeeya koox isku xidhan oo ka kooban Amniyaadka Dubai iyo ganacsade reer Djibouti ah. Kooxdaas oo maslaxado shaqsiyadeed ku fushanaya mas’uuliyaddii iyo suldadii lagu aaminay.
Beryahan dambe ganacsatada Soomaaliyeed waxaa lasoo gudboonaaday baqdin, Cabsi iyo welwel joogta ah oo ku hayaan kooxdaa Amniyadka sheeganaya gaar ahaan Amniyaadka Dubai waliba qaybtooda qaabilsan soomalida.
Kooxdaasi waxay caadaysteen in ay ku been abuurtaa ganacsatada Soomaaliyeed (GS) ee degan Dubai markay ka waayaan maslaxadooda shaqsiyadeed.
Caddalad darada GS ee Dubai ay kacabanayaan waxaa kamid ah.
1: Ganacsatada Soomaaliyeed waxaa lagu sameeya Musaafuris deg deg ah iyadoo aan lamarin maxkamadaha iyo hayadaha kale sharciga dalka.
2: Ganacsatada ma helaan cid u dooda sida dowlad ama Safaarad Marka ay la kulmaan arimahan oo kale. Sida daradeed lama mariyo wax baadhitaan cadaalad ah oo ay ku qancaan.
3: Ganacsata Soomalida lama tuso Ama looma sheego danbiga ay ku mutaysteen in la masaafuriyo, wax daliil ah oo muujinaya in ay denbigaa lagu eedaynayana lama siiyo.
4: inta badan lama siiyo wakhti ay hantidooda kusoo urur sadaan ama fursad ay ku iibiyaan hantidooda maguurtada ah.
Arintan xanuunka badan ee ka baxsan hab-dhaqanka aadanaha iyo Shuruucda Caalamiga ah iyo heerka ilaalinta heshiiskii Geneva, ee ilaalinta xuquuqda aadanaha iyo xuquuqda dadka aan dalkooda joogin ee ganacsatada Soomaaliyeed ee Dubai ku nool lagu haayo waxay soo socotay muddo sanado ah.
Kooxdaasi Obaid Abu Ali ganacsato Soomaaliyeed oo badan ayey wadanka qasab kaga saartay, kuwaas oo aan helin wax Maxkamad iyo cadaalad ah qaar kale oo badana waxay ka qaateen passporadoodii safarka, halka qaarna uba xidhxidhan yiih hada.
Shabakadda Magafayaasha iyo sida ay u shaqeeyaan
Shabakadkaddaan waxaa ay ka kooban tahay inta la ogyahay waa 4 nin
Seddex nin oo shabakaddan ka tirsan waxaa ay u dhasheen Imaaraadka,waxayna sheegtaan in ay u shaqeeyaan Amniyaadka Dubai, halka mid kalena u dhashay Soomaaliya, wuxuuse haystaa Basaboorada dalka Djibouti, waxaa kooxda Ka dhexeeya maslaxad ay Wada ilaashanayaa oo ah dhuxusha laga soo dhoofiyo Somalia. cid kasta oo ay u Arkaan in ay maslaxadaa khatar ku yihiina way xidhaan dabadeedna deg deg ayey dalka uga saaraan iyagoo dembiyo been abuurah dusha kasaaraya qofkay Donaan.
1. Cubayd abu Cali, UAE, tel:0502488985— waa ninka madaxda ka ah Shabaddan, wuxuuna haystaa amniga Dubai gaar ahaan qaybta soomalida. Abu Cali, waa ninka awooda buuxda u haysta in uu ganacsada somalida siduu doono ka yeelo, iyada oo aan wax maxamadka ah la soo taagin. Ninkani meel looga dacwoodo majirto oo aan illahay ahayn.
Abu Cali, wuxuu awoodaa in uu dambi aadan gelin amaba xataa waligaa maqal dusha kuu saariyo walina kugu musaafuriyo haddii uu maslaxadiisa shaqasa magafanimada ah uu u arko. Waxaa yaab leh isaga denbiga kuu samaynaya oo isagaa ayaa haddana ku soo qabsanaya waliba si aan sharci ahayn ku xukumaya ka dibna ku masaafurinaya (all in one person) isaga ah boolis isagaa ah Maxkamad isaga ayaana ah sameeyaha dambiga.
Waxaa qariib ah in waxaas oo idil ay dhacayaan ayadoo aan waxba kala socon hay’adihii ku shuqulka lahaa.
waxaa se ka sii xanuun badan markaad cadaalad ka raadsato Dubai dhexdeed, qofkasta wuu kaa caraayaa isaga oo leh amniga Dubai waa hay’ad Qalad iyo Sax miday doonta samaynaysa cidina aan ka hadli karin.
2. Maxamed Catiiq —- Abu Cabdullahi, waxaa uu u dhashay Imaaraadka.
Jagadiisa waa qof ka shaqeeya xafiiska ammaanka Tel:0504406239 == Waana ninka dadka waraysta ee wax ka qora, wuxuu awood u leeyahay in uu denbi been ah dusha kuu saaro.
3: Axmed, waxaa uu u dhashay Imaaraadka, wuxuu ka shaqeeyaa amniyaadka—-
Waa ninka labaad ee ganacsatada Soomaliyeed ee Dubai waraysta, Ninkaan intaas waxaa u dheer isagoo Soomalida u caga-jugleeya marka uu xafiiskiisa ku waraysanayo.
wuxuu Soomalida ku xiraa qol aad u qaboob oo (-0) si beenta uu rabo u qirtid marka lagu waraysanayo.
Ninkaas wuxu caadaystay tacdiibka ganacsatada Soomaalida wuxuu ku waraysta istaga 3 ilaa 4 saacadood oo xiriir ah halka isaguna kursi raaxo badan isku ruxayo.
4. Bashiir Khaliif Muuse (Bashir Mageffe) waxaa uu u dhashay dalka Djibouti.
Bashiir waa ninka Sameeya waraaqaha been abuurka ah ee dhuxusha Soomaaliya sida sharci darrada iyo qarsoodiga looga soo dhoofiyo.
Waa ninka labbaad ee dhuxusha ka soo dhoofiya koofurta Soomaliya, waana ninka Soomaalida Dubai jaajuusa kuna been abuurta —-Tel:00971506539281.
Bashiir, waa nin aan Abu Ali warkiisa diidi Karin maadaama uu dhaqaale badan soo geliyo Abu Ali iyo shabakadiisa mageffayaasha ah.
Bashiir, waxaa uu si toos ah ugu xiran yahay ninka magaciisa aan kusoo xusnay Nambar koowaad, wuxuna caadaystay in uu ganacsade kasta oo Soomaali ah oo uu u arko inuu khatar ku yahay maslaxadiisa iyo howlaha dhuxusha sharci darada ah ee uu ku dhexjiro Ku been abuurta dabadeedna wuxuuu ku soo diraa Abu Cali iyo Abu Cabdullahi, si ay talaabo deg deg ah uga qaadan islamarkaana wadanka uga masaafurinaya. —labadaan nin ayaana wadanka kasaara cidii Bashiir hadal ku soo celisa ama ka hortimaada maslaxada shabakadda mageffayasha ah.
Midda labaad, Bashiir, wuxuu kismayo iyo buurgabo si toos ah uga soo dhoofiyaa dhuxul aad u farabadan wuxuuna soo geliyaa suuqyada dalalka khaliijka oo dhan, isaga oo isticmaalaya waraaqahaasi been abuurka ah ee uu isagu sameeyo.
Bashir wuxuu haystaa in kabadan 100 tiimbare oo ‘fake’ ah oo kala nooc ah, wuxuuna awood u leeyahay in uu sameeyo waraaq kasta oo been abuur ah oo qof kasta lagu dulmin karo.
Ahmed Barre yuu uxidhan yahay?
Ahmed Barre waa nin kamid ah ganacsata Soomaalida ah ee aadka looga yaqaano Dubai iyo dalka Somalia, oo dhan, waa ganacsade wadanka imbadan joogay isaga iyo reerkiisuba, wuxuuna ku leeyahay magaaladda Dubai shirkado badan iyo guryo badan.
Axmed, waxa haysata kooxdaa dadka ganacsatada ah dhibaatada ku haysa, waxaana lagu haystaa si xaqdaro iyo dulim ah, wuxuuna ku xidhanyahay xabsiga Ceweer ee Ku yaala Dubai.
Axmed Barre, waxaa xadhigiisa xaqdarada ah ka danbeeyey ninka reer Djibouti-ga ah (Bashir) kadib markii khilaaf dhexmaray labadaa nin sanadihii tagay dabadeedna Bashir ayuu u maleegay mu’aamarad qarsoon isaga oo la kaashaday nimanka amniga sheeganaya ee Abu Cali iyo Abu Cabdulllah. Ahmed barre waxaa looga yeeddhay xafiiska Muraaqabad–(station police) taariikhdu markey ahayd 09/05/2017. waxana lagu sameeyey baaritaan aad u adag ee afka qalaad lagu yirahdo (harsh interrogation) iyo ciqaab adag isaga oo mudo saacadaha lagu hayayey qol aad uqaboow. ka dibna waa la xiray cadaaladda Inuit Arkana kooxda Obaid Abu ali Ayaa iska hortaagay.
Haddaba Waa maxay denbiga been abuurka ah ee Ahmed Barre loo sameeyo ama loo diyaariyo si loogu dulmiyo???
Ahmed barre waxaad lagu ee deeyey in uu lashaqeeyo kooxda dabagal dhuxusha soomalida ee UN mamnuucday ee loo soo gabiyo SEMG .kooxdaas oo baadhitaan Iyo dabagal adag ku haysa dhuxusha sharci darada ah ee Bashiir iyo kooxdiisu sida qarsoodiga ah uga dejiyaan dekedda Xamriya.
Ahmed Barre waxaa kooxda Obaid Abu Ali si toos ah u weydiiyeen xidhiidhka ka dhexeeya isaga iyo ninka kooxda badhayaasha dhuxusha ka midka ah ee Charles layiraqhdo oo ah ninka haysta kooxda dabagal dhuxusha ee Qaramada Midoobay.
Ahmed barre wuxuu usheegay kooxda Obaid Abu Ali in uusan xataa maqal ninkaa charles magaciisa weligii wax xidhiidhahna uusan kadhexayn isaga iyo SEMG.isku sooduub, Ahmed Barre wuxuu uxidhan yahay charles baad lashaqaysaa oo ku gacanaiisaa qabashada doomyaha dhuxusha mamnuuca ah.
Axmed Barre markii uu arkay mu’aamaradan qorshayna wuxuu la kulmay Mr. Cumar Cabdi rashiid Cali Sharmarke oo ahaa raisal wasaarihii hore ee Soomaaliya sidoo kalena xiriir fiicana dowladda Imaaraadka la leh,si uu gacan uga siin lahaa sidii uu daaliminta isaga difaaci lahaa.haseyeeshee Mr.CCC waxaba kama qaban dhibaatada iyo dulinkaa Ahmed lagu hayey.
Mr.CCC arintaas dulmiga ah iyo dadka kulug lehba aad buu uga dheregsanahay waayo? Somali badan oo ganacsato ah ayaa cabasho ugu Tagtay hotelka uu Dubai ka degan yahay si uu dulimkaa wax ugala qabto wuxuuna u balanqaaday in uu arintaas wax kaqabanayo.welise wax Ugama suurtogalin.
Axmed Barre maadaama uu hanti badan oo maguurto ah iyo shirkadoba ku leeyahay Dubai wuxuu codsaday in caddaalada la geeyo amaba damiin lagu sii daayo lana siiyo wakhti ku filan oo uu ku diyaar garoobo maadaama uu wadanka wax badan deganaa oo dad iyo xoolo badana kaga daadsanyihiin, hase ahaatee taasi waxaa ka hor istaagay Cubayd Abu Ali, oo ah ninka sida khaaska ah uu ugu xiran yahay dulmane Axmed Barre.
A. Waxaa dowladda Imaaraaadka iyo umaradeedda khayrka iyo sharafta baddana laga codsanayaa in ay Axmed Barre u ogolaadaan in uu maxkamadda cadaalad ah helo.
B. SEM Group gaar ahaan charles waxaa laga codsanayaa in uu gacansiiyo Mr.Ahmed Barre maadaama uu daraadiis loo haysto loogana masaafirinayo wadanka emiraadka
C. Dowladda Soomaaliya waxaa laga codsanayaa in ay emiradka ko codsato in Ahmed Barre u cadaalada helilo loona diro koox xaqiijisa danbiga ahmed Barre u xidhanyahay sida ugu Shakespeare badan.
D. qof kasta oo wax u qaban kara Dulmane Axmed Barre, oo ku xiran xabsiga Caweer, ee Dubai, waxaa laga codsanayaa inay u istaagaan sidii Axmed Barre, caddaalad uu u heli lahaa iyo waliba sidoo uu xoriyadiisa dib ugu heli lahaa.
Gebagebadii, waxaa cad in ganacsatada Soomaalida ee Dubai Ku nool ay hada wada dareemeen dhibaatada kooxdaa Amniyaad-ka sheeganaya ay ku hayaan iyo caddalad la’aanta ay la kulmaan marka arimahan oo kale ku dhacaan, sidaadaraadeed waxay dowladda iyo umaradeeda Karim codsanayaan in ay waxkaqabtaan dhibaatadaa dadka ganacsata ah ee somaliyeed ay kala kulmaan kooxda Obaid Abu Ali
Habiib Abraar and Hussein yusuf
Freelance Journalist based in Mogadishu Somalia, focusing on conflicts across Somalia.
War hada: Ciidamada dowladda oo dib ugu laabtay deegaanka Buulo-Guduud oo shabaab ay dagaal kula wareegeen
DEG DEG: Dowladda soomalia oo ugu dambeyn war xasaasi ah ka soo saartay arinka qalbi dhagax
Gen Dhuumaal oo Xil loo magacaabayo iyo Wafdi ku wajahan Gedo
TOP NEWS: Maxaadan Ogeyn oo Halis ah oo Xalay ka dhacay deegaanka lagu Magacaabo Masaajid Cali Gaduud oo Gobolka Sh.dhexe ka tirsan
Tifaftiraha K24 8th June 2016
DEG DEG: Cadaado oo Ciidamo badan lagu daadiyay iyo Xaaladda oo aad u kacsan Xildhibaanada oo….
Tifaftiraha K24 14th January 2017 14th January 2017